Isikhumba se-Pisa Pelle Italian
Thola ikhodi yesaphulelo eyimfihlo ku-imeyili yakho.
Zonke izigaba Zonke izigabaizesekeliubhakaibhandeisikhwama sebhayisikilibambaisiphambanoicala ledokhumentiisikhwamalaptopisithunywaihlombetravelisikhumbaisikhwama
Kwenziwe ngesandla eTuscany, e-Italy
Thenga ama-Italian Leather Bags ase-Italian ngamanani entengo enkulu
Isitolo Clutch Izikhwama
Thenga Amahlombe Amahlombe
Isitolo Cross Body
Thenga Izikhwama Zabesilisa
Thenga Izikhwama Zokuhamba
UPisa Pelle unesifiso sezinto ezenziwe ngezandla nezobuciko. Sinezingcweti ezinhle kakhulu eTuscany, e-Italy. Isifunda saseTuscany e-Italy siyinhliziyo nomphefumulo womkhiqizo wezikhumba zikanokusho womhlaba wonke onezimfihlo zokuhweba ezidluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane.
Izimfihlo zomndeni zidlule ngomlando
Isikhathi sokuphuma, sokuqhubeka kanye namandla sombuso wedolobha laseMedieval e-Italy kwakuyindawo ekahle yokuthi imboni yokushuka kwesikhumba iqhume. Kwasungulwa ama-Guilds ukuvikela amasu ayimfihlo asetshenziselwe ukukhiqiza izikhumba ezisezingeni elingalingani nakwezinye izindawo emhlabeni. Lezi zinqubo ziseyizimfihlo zomndeni ezivikelwe ngokuseduze, ezinikezwe isizukulwane ngesizukulwane ezindaweni lapho kukhiqizwa khona izikhumba ezinhle kakhulu isikhathi esingaphezu kwengxenye yeminyaka. Namuhla i-Italy ibanga cishe i-16% yokukhiqizwa kwesikhumba emhlabeni nangaphezulu kokuthathu kokuthathu kwesikhumba esikhiqizwa eYurophu.
Izinto ezisezingeni eliphakeme kanye nokunaka imininingwane
Lezi yizici, ezenza ukudala kwethu kube yiqiniso futhi kumelele ubuciko beTuscan.
Ukugqama komkhiqizo kithina umphumela phakathi kwesiko namagugu wesimanje.
Kuyinhloso yethu ukuthola umkhiqizo, ohlangabezana nezidingo zanamuhla zokuguquguquka kwe-ergonomic.
Kuchazwa Isikhumba Esiphezulu
IPisa Pelle iphethwe yinkampani yokuthengisa nokuthengisa yaseMelika eseTexas. UPisa Pelle unesifiso sezinto ezenziwe ngezandla nezobuciko. Sithole izingcweti ezinhle kakhulu eFlorence & Pisa, isifunda saseTuscany e-Italy. UFlorence uyinhliziyo nomphefumulo womkhiqizo wokunethezeka wesikhumba emhlabeni onezimfihlo zokuhweba ezidluliswa izizukulwane ngezizukulwane. Sikhethe abahlinzeki bethu ngokuya ngekhwalithi ehlukile kanye nokuxhumana okuhle ukusisiza ukuthi sinikeze ngamakhasimende avelele. Sithumela umhlaba wonke. Kungakapheli isonto sizosebenzela amazwe ahlukene angama-30 kuwo wonke amazwekazi ngaphandle kweSouth Pole. Isevisi yamakhasimende yinto yethu eza kuqala. Ngoba ngaphandle kwakho sizophuma ebhizinisini. Sicela usilandele ku-Instagram naku-Facebook.
Umbhalo, i-imeyili noma Ucingo: + 1 214-444-9482
American Express Apple Pay Club Diners Discover Elo I-Google Pay I-JCB Mastercard PayPal Thenga Pay Venmo show